ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံ/An assortment of various recepies | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
မြန်မာမုန့်များ / Burmese Desserts(51)
ငှက်ပျောသီးဆနွမ်းမကင်း/Burmese Banana Cake
ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကြော်/Fried bread soaked with egg
ဂျုံပူတင်း( ဖာလူဒါမှာသုံးရန်)/ Flour Pudding (to use in Falooda or Faluda)
ကြေးအိုးချက်စားမယ်/Let’s cook and eat Kyay-oh
ဘယာကြော် ပူပူလေး/ Deep fried warm Chana Dal
မုန့်ဟင်းခါး/Piquant Fish Soup With Rice Noodles
ပဲသွေးလေးနဲ့နို့စိမ်းအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ/Black Tofu, evaporated milk and coconut cream noodle
ကြက်ဥကင်/Grilled Chicken Egg
တိုဟူးနွေး/Warm Gram pea Gravy (with Sticky rice vermicelli)
လ္ဘက်ရည်ကျစိမ့်/Strong and rich tea
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ/Cooked Oiled Noodle
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ငပိထောင်း
ကူလ်ဖီးမလိုင်( စတော်ဘယ်ရီ၊ ချောကလက်၊ Pistachio ၊နို့ )
Burmese Crispy Pancake (ခေါက်မုန့်လုပ်နည်း)
မုန့်ကြွပ်ကြော် (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲတို့အတွက်သုံးရန်)
သီးစုံဆန်လှော် ဆေးခါးဟင်းရည် (အင်းလေးရိုးရာ)
ပဲထွန်ဆေးခါးဟင်းချို (အင်းလေး- ရှမ်း)
မြန်မာဟင်းလျာများ/ Burmese dishes
ကွမ်းရွက်နဲ့ချက်တဲ့ ဂဏန်းအစပ်/Spicy crab cooked with betel leave(piper betle)
ဝက်ခြေထောက်စတူး/Pork Leg Stew
အုန်းထမင်း၊ ထောပတ်ထမင်း နဲ့ကြက်သားဟင်း
ကြယ်သီးမှိုအစပ်ချက် /Spicy Button Mushroom Curry
ငါးကျည်းခြောက်နဲ့သရက်သီးစိမ်း (ငါးခူငပိကောင် )
မုန်လာဥပိုးတီသုတ် ( ဓားဖြင့်ပိုးတီလှီးနည်း )
ကိုရီယား အစားအစာ/ Korea
ကိုရီယားရေညှိသုတ်/ Korea seaweed salad
ဆွမ်းမွှေးကြက်သားကြော်/Deep Fried chicken wrapped with pendan leave
ပင်လယ်စာပဲကြာဇံသုတ်/Seafood Glass Noodle Salad
ယိုးဒယား Pad Thai ခေါက်ဆွဲကြော်
တရုတ်အစားအစာ / Chinese
ကြက်ဆီထမင်း/Hainanese chicken rice
ပုဇွန်ထောပတ် နဲ့ ကြက်ဥအမြုပ်ကြော်
ဘိတ်ချဉ်လေး နဲ့ ဝက်သားလုံးကြော်
သတ်သတ်လွတ်ဟင်းများ / Vegetable(4)
ဝက်နံရိုး နဲ့ ကြံမဆိုင်ဟင်းရည်
နိုင်ငံရပ်ခြား အနောက်တိုင်း၊ ဥရောပအစားအစာ
French Macaroons( ပြင်သစ်အချိုမုန့်)
မော်ရကိုအမဲသားနှပ်/ Moroccan Beef Tagine
ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေးနဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်cake pop
snow man cake pop
Leeks and Potatoes Creamy Soup (ကြက်သွန်မြိတ်၊အာလူး ဟင်းရည်)
အရံဟင်းလျာများ/ Side dishes (3)
ပဲကပ်ကြော်/Fried chick peas in glutin rice dough
ငါးဖယ်ချဉ် (ခ) ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်း
စားတော်ပဲပြုတ်/Boiled Green peas or Garden peas
ရနံ့သင်းပုဇွန်ကင်၊ အစာသွပ်ငါးကင်နဲ့ ကျောက်စိမ်းချဉ်
180 comments on “ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံ/An assortment of various recepies”
21/02/2012 @ 7:52 am
ိသက်ရေ သမီးဖေ့ ဘွတ်ထဲကဟင်းချက်နည်းတွေရလို့ အန်တီအထူးဘဲကျေးဇူးတင်တယ် အန်တီပဲကမုံရွာသူပါ မိုမိုသီဟန်တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေအမျိုးတောင်တော်ပါသေးတယ်အစားအသောက်ဆို
ရင်စိတ်ဝင်စားတယ် ကို တိုင်လဲလုပ်စားတယ်အပေါင်းသင်းတွေကိုလဲမျှေ
21/02/2012 @ 3:25 pm
ဟုတ်ကဲ့ အန်တီပဲ ။သင်စရာလေးတွေ တွေ့ရင်လဲသင်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါနော်။ မမို နဲ့လဲ ခင်တယ်။သူ့သားလေးတွေက လဲချစ်စရာလေးတွေရယ်။.
25/02/2012 @ 6:52 pm
25/02/2012 @ 7:04 pm
thank u naw emily ..
03/03/2012 @ 12:52 am
03/03/2012 @ 4:34 am
ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဦးညီ 🙂
04/03/2012 @ 1:17 pm
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ စေတနာရှင် ဘလော့လေးပါ… ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကလဲ အားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါ…. အသစ်အသစ်တွေ တင်နိုင်ပါစေလို့ လဲ ဆုတောင်းပါတယ်…ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်…
04/03/2012 @ 1:57 pm
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုcomments လေးတွေကအားရှိအောင်ပံ့ပိုးပေးတာပါ..
08/09/2013 @ 12:18 am
Hi Eithet Nyi Ma Lay , I just found your Blog and It’s incredible and I appreciate that. If you publish the book, can you let me know when it is available to purchase? I live in America however, so i was wondering if it would be no trouble for you.Thanks again.
15/09/2013 @ 9:26 pm
it will be happened very soon ma. food magazine arranging for my book now. thanks for ur support 🙂
06/03/2012 @ 5:08 am
06/03/2012 @ 9:44 am
su mon paing
08/03/2012 @ 4:07 am
မမက ဓနုဖြူ ထမင်းဆိုင်နဲ့ အမှတ်တရအအေးဆိုင်ကပိုင်ရှင်မိသားစုကိုး ..ခင်ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်မ.. အမှတ်တရအအေးဆိုင်ကညီမ ဒီမလာခင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဆရာကြီးဦးမြကြိုင်ဆီမှာတက်တုန်းက ၁ပတ်ကို ၄ခေါက်လောက် ထိုင်ဖြစ်ကြတယ် .. ဓနုဖြူထမင်းဆိုင် ကိုလဲ အမြဲသွားစားဖြစ်ကြတယ် ..မှတ်မှတ်ရရ ညီမမြန်မာပြည်နောက်ဆုံးပြန်တုန်းက အဲ့ဆိုင်မှာ ၇ခေါက်ထက်မနည်း သွားစားခဲ့တယ် ..ဟင်းချက်အရမ်းကောင်းလို့ ..အဲ့ကဟင်းတွေကြိုက်လို့ ..ညီမတို့အိမ်က လှည်းတန်းကုန်းတံတားဟိုဘက်အဆင်းမှာ ..လှည်းတန်းတခွင်သမိုင်းတခွင်ဆိုတာ မရောက်တဲ့နေ့ဆိုတာခပ်ရှားရှားရယ် သင်တန်းမရှိရင်တောင် ညနေစောင်းမုန့်သွားသွားစားနေကြ ..မမဟင်းချက်နည်းလေးတွေက ပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ချင်းပြထားတော့ လိုက်လုပ်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်မမ ..ညီမတချို့ဟာတွေကို ကူးပြီး ဖိုင် တခုထဲမှာသပ်သပ်သိမ်းထားတယ် ..လုပ်ချင်တဲ့အခါ ပြန်ရှာရခက်မှာစိုးလို့ မမခွင့်ပြုတယ်မဟုတ်လား ..ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ..ဒီမှာ တခုခုမသိလို့မေးရင်မပြောပြကြဘူး အခုလို ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ ခင်မင်ရတော့ အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတယ် .. ဘယ်သူ့မှမေးစရာမလိုတော့ဘူး မမတို့ကိုပဲမေးတော့မယ်
13/03/2012 @ 9:55 am
ညီမလေးရေSorry နော် မ စာပြန်တာနောက်ကျသွားတယ်။ ခွင့်ပြုပါတယ် ညီမလေးရေ။ မ လဲကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စားချင်ရာ မစားနိုင်တဲ့ မစားရတဲ့ ဒုက္ခကို မကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ဒီ blog ကိုစလုပ်တာပါ။ အသိမပေးလဲရတာကို တလေးတစား ခွင့်တောင်းတဲ့ ညီမလေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အရမ်းလေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ နောက်လဲ မေးချင်တာရှိရင်အချိန်မရွေးမေးပါနော်.. 🙂
13/03/2012 @ 9:56 am
By the way, My husband is one of the students of Sayargyi U Mya Kyaing.
08/03/2012 @ 8:20 pm
့ဟင်းချက်နည်းတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ် ဒို့တခါမှမချက်ဖူးသေးတဲ့ဟင်းတွေ များကြီး၇ှိတယ် 🙂
စိတ်ကူးအသစ် အစမ်းလေးတွေနဲ့ ဟင်းတွေအများကြီးချက်နိုင်ပါစေ
ကျေးဇူးအများ အများကြီးပါ 🙂 🙂
08/03/2012 @ 10:20 pm
khin gyi dwe
19/10/2013 @ 3:13 am
THANKS A LOT MA EI THAT YAY .I LIKE YOUR EVERY COOKING.I’M COOPY EVERYTHING ,THAT’S GOOD FOR MY FAMILY 🙂
09/01/2014 @ 12:14 am
thanksalot parama yay 🙂
12/03/2012 @ 1:50 am
12/03/2012 @ 7:56 pm
ဟုတ်ကဲ့ အမြဲလာပါနော် 🙂
nay chyi lin
13/03/2012 @ 10:48 am
မင်္ဂလာပါ… ညီမဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို အစ်မသုံးတဲ့ ဖိုရမ်ထဲမှာ ညီမရဲ့ blogလိပ်စာလေးကို credit ပေးပြီးတော့ ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်။ အစ်မညီမလေးက ညီမတင်ထားတဲ့ ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော်နည်း နဲ့ကြော်ထား အရမ်းစားကောင်းတယ်။ မကြီး နင်လည်း လုပ်စားကြည့်ပါလားလို့ ပြောရင်းနဲ့ ညီမဆီ အလည်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
13/03/2012 @ 11:51 am
္မ္မမရေ .အသိမပေးလဲရတာကို တလေးတစား ခွင့်တောင်းတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အိသက် Blog ကို ကြောငြာသလိုလဲ ဖြစ်တာမို့ ကျေးဇူးပါနော်။ ရပါတယ်မရေ ယူပါ။ မ ဖိုရမ်လေးလဲlink ပေးပါဦးနော်။ လေ့လာချင်ပါတယ်။
23/03/2012 @ 11:42 pm
24/03/2012 @ 3:41 am
i will post it very soon naw 🙂
27/03/2012 @ 5:29 am
a ma yayy .. kyae zuuahtoo par naw ..amyae win kyi chin ag sawe sg mhuuapyae shi tae 🙂 lite pee cook mal naw .. . yangon mhar tone ka tot ဓနုဖြူ ထမင်းဆိုင် mhar nga yant Oo hinamyae sar nay kya par ..ama ko ta khu loutakuuanyi tg chin par tal .. shan mont nyin chin lote nee lay thi chin par tal ..bae lo mont nyin ywat nae lote ya mal so tar kaasa ma thi lo par 😦
a ma thi yin lann nyoun pay say chin par tal .. kyae zuuahtoo par naw ,, 🙂
27/03/2012 @ 5:43 pm
hote . i will post it soon naw. 🙂
10/04/2012 @ 12:32 pm
ဟင်းချက်နည်းအသစ်တွေဖတ်ပြီး …. ပျော်ပြီးပြန်သွား၏
အဖွားနှင်.မိသားစု၏ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူဖြစ်လို.ဂုဏ်ယူ၏
ပိတ်ရက်ကျရင် အိသက်ရဲ. ချက်ပြုတ်နည်းများနဲ. အမျိုးသားကိုလက်စွမ်းပြလိုက်အုံးမယ် …
10/04/2012 @ 7:20 pm
စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတတ်တဲ့ စုရေ။ အမျိုးသားက တော်တော်ချစ်မှာပဲနော်။ ခဏ ခဏblog ကိုလာလည်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကြော်ငြာပေးပါနော် 🙂
18/04/2012 @ 10:07 am
အမရေ.. အမအရမ်းကိုတော်ပါတယ်.. တကယ်ကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူး..အချက်အပြုတ်ဒီလောက်တော်တာအရမ်းလဲအားကျပါတယ်.. ညီမက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီငပိထောင်းကို ၇တန်းနှစ်လောက်ကတည်းကအရမ်းကြိုက်ပါတယ်. ရန်ကုန်နဲ့အဝေးမှာဆိုတော့သွားဝယ်စားလို့လဲမရဘူးအမရယ်..ညီင်္မကိုလုပ်ပုံလေးပြောပြပေးပါနော်..ညီမလုပ်စားချင်လို့ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.. facebook မှာလဲအမကို invite လုပ်ထားတာ accept လုပ်ပေးပါနော်..အမနဲ့အမမိသားစုလေးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမ်းမာချင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ
18/04/2012 @ 12:40 pm
Where do you live Nyi Ma Yay:)
18/04/2012 @ 2:15 pm
အမရေ..ညီမက Singaporeကပါ 🙂
Min Thwin Oo
06/05/2012 @ 3:52 am
ဘီစီမှာ သင်တန်းတခု အတူတူတက်ဖစ်တယ်။ classmate ပါ။ ခုလိုပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဘယ်အတန်းလည်းတော့ မေ့သွားပီ ဒေးဗစ်အတန်းလား အလက်စတာ အတန်းလား မသိဘူး။
06/05/2012 @ 11:27 pm
nice to meet you naw . if i can see ur pic that will be nice 🙂
09/05/2012 @ 11:57 pm
Nice blog Ei Thet. Thank you for all the recipes. Really appreciate it.
10/05/2012 @ 12:13 am
11/05/2012 @ 3:25 pm
မမ အိသက်ရေ ..ချောက အရင် က ၈ မိုင်မှာနေသူမို့ ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ (လှည်းတန်း) ဆိုင်မှာ အမြဲစားနေကျပါ.. အကြိုက်ဆုံး အသည်းစွဲ အမြဲစားတာကတော့ ပုဇွန်ချဉ်သုပ် နဲ့ အထောင်းပါ ..ဓနုဖြူဒေါ်စောရီရဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ငပိထောင်းကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူ ကောင်းလွန်းလှလို့ အခု မလေးရှားရောက်နေတာတောင် လူကြုံရှိရင် ၀ယ်ပို့ခိုင်းရပါတယ် ..
မမ ရဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေ အတွက် အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
ဖြစ်နိုင်ရင် အထောင်းလုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးပါနော် ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ..
11/05/2012 @ 5:48 pm
thank you chaw suu 🙂
Aye Myint Min
11/05/2012 @ 4:44 pm
love your blog Ei Thet!!
just recently found out from your facebook.
going to try the thargu pyin recipe 🙂
15/05/2012 @ 3:10 am
မအိသက်ရေးတာ ပြောတာလေးတွေလဲ ကောင်းတယ်
15/05/2012 @ 9:03 pm
thank you nyi ma lay 🙂
Nang Thandar Aung
20/05/2012 @ 10:38 am
Sis yay… very nice site… hinn chat knee dweamyar gyi thi bi.. thanksalot sis, and keep posting naw… xxx
21/05/2012 @ 6:44 pm
Darli Pwint Phyu
22/05/2012 @ 3:04 am
Hello…Ma Ei Thet…
I saw you on FB…I am Nay Zin’s friend and live in Canberra(Australia)…I and my husband like Burmese food so much and I cook Burmese food…When I was in Myanmar before marriage, I never cooked but I hadalot of experience from watching my mum and my aunt…My mum is good at cooking especially curry types and my aunt is good at making Burmese snacks…and my husband likes Burmese snacks so much…So, I tried my best to make some burmese snacks but don’t know much how to. I have learnedalot from your website which is extremely useful and invaluable to us who are abroad. Whatawonderful cook you are! A million thanks for everything.
22/05/2012 @ 11:58 pm
you r most welcome par Darli 🙂 thank for supporting me and my website. i will try my best for my website:) thanksagain:)
25/05/2012 @ 2:38 pm
မမရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးတို့ လို ဟင်းသိပ်မချက်တတ်တဲ့ သူတွေက ဟင်း မျိုး လေးငါးခြောက်မျိုနဲ့ ပတ်လည်ရိုက်နေရတယ် မမရဲ့မမကျေးဇူးနဲ့ ဟင်းနည်းသစ်တွေရသွားပြီ ကြိုးစားချက်ကြည့် အုံးမယ် မမရေ
25/05/2012 @ 2:46 pm
thank you for interesting nyi ma lay 🙂
Nay Si Lin
29/05/2012 @ 8:19 am
29/05/2012 @ 4:36 pm
04/06/2012 @ 3:40 am
ညီမက ရန်ကုန်ကပါ။ ၀ါသနာက အစားအသောက်ပါ။ Blog တွေလျှောက်လည်ရင်လည်း အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တာကိုကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဟို Blog ဒီ Blog ကြည့်ရင်းမဆီရောက်လာတာပါ။
ရန်ကုန်ကမမတို့ဆိုင်ကအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ ပုစွန်ထုပ်ဆီပြန်နဲ့ ငါးပိထောင်းပါ။ ဆိုင်ကပေးတာနဲ့ဆိုအမြဲမလောက်ပါဘူး။ ကြိုက်လို့ 🙂 အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပေးထားတာကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
04/06/2012 @ 11:19 am
အားပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးရေ 🙂
07/06/2012 @ 9:27 pm
Thanksalot for your all recipe.
10/06/2012 @ 6:47 pm
welcome par su yay
Aye Aye Tint
29/06/2012 @ 11:46 am
ဟင်းချက်ဝါသနာပါလို့ ပါ။ကြိုက်တာရှိရင်ရှယ်ပါရစေ။တောင်ကြီးမှာနေတုံးကရန်ကုန်ရောက်ရင်27လမ်းကဆိုင်မှာအမြဲစားဖြစ်တယ်။အခုရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့ အစဉ်ပြေသွားတာပေါ့ ။
30/06/2012 @ 9:15 am
sis yay 29 street par . anyway thanks naw 🙂
17/07/2012 @ 12:40 am
Hi Ei Thet.
what burmese font do i use to read the recipe?
I have ZawGyi font, but that doesn’t seem to work 😦
04/08/2012 @ 5:10 am
အမအိသက် အမဆီက ဟင်းချက်နည်းလေးတွေနဲ့ ညီမတော့ တော်တော်ချက်ရပြုတ်ရအဆင်ပြေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကက္ကတစ် ငါးအသားတုံးတွေလေးတွေ ရထားလို့ အမ။ အသားချည်းချည်း ကလေးလက်သီးဆုပ်လောက်တုံးလေးတွေ ရေခဲရိုက်ထားတာ။ ဘယ်လိုချက်စားရကောင်းမလဲ မသိလို့ အမရေ ကူညီပါအုံးနော်
04/08/2012 @ 1:51 pm
ကကတစ်က သိပ်ချိုတယ်ညီမရေ အချိုနှပ်စားပါသိလား အရသာအလွန်ရှိတယ်နော်:)
05/08/2012 @ 5:47 am
ကျေးဇူးမမ။ ညီမ ကြိုးစားချက်ကြည့်မယ်။ 🙂
MYA THANDA PHYU
06/08/2012 @ 11:34 am
U ARE VERY PERFECT VERY EXCELLENT…,THANK U SO MUCH YOUR DISHES ARE VERY DELICIOUS
06/08/2012 @ 7:59 pm
thank you so much for ur sweet comment 🙂
07/08/2012 @ 11:14 pm
thank you so so much par 🙂
10/08/2012 @ 5:21 am
14/09/2012 @ 5:08 am
အိသက်ရေ.. မချောစုကလည်း လသာ၂ က ပဲ.. အိသက်ကိုမြင်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ မြေးမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်.. facebook မှာလဲ add ပြီးပြီ London မှာ ရှိတဲ့ အိသက်သိတဲ့သူတွေ လသာ၂ က သူတွေကို အမလည်းသိ တယ်.. အမ သိနေ မြင်ဖူးနေတာရယ်.. blog လေးရေးပေးနေလို့ သိရတာ ဝမ်းသာတယ်.. အမလည်း ရန်ကုန်မှာတုန်းက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ဆိုင်တွေမှာ စားတယ်.. အရမ်းကြိူက်.. ဒီblog ကိုလည်းလာလာလည်မယ်နော်..
16/09/2012 @ 11:33 am
thank you naw ma chaw su . pls do visit to my blog often 🙂
19/09/2012 @ 4:28 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.dim sum လုပ်နည်းပေးပါဗျာ။
19/09/2012 @ 9:48 pm
27/09/2012 @ 2:33 am
မအိသက် ဟင်းချက်နည်:တွေမျှဝေပေးတဲအတွက် ကျေ:ဇူ:အထူးတင်ပါတယ်နော် တခါတလေဘာချက်စားရမှန်:မသိရင်
ဒီမှာလာကြည့်ပီ:ချက်စားတယ် Thanks again ပါနော် 🙂
Thank you so much for visiting my blog sis yay 🙂
04/10/2012 @ 12:59 pm
မရေ လူအများသိပြီမှသိရတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ညီမက ကလောသူပါ။ မ နားကနည်းတွေ
04/10/2012 @ 10:54 pm
ဘယ်တော့မှ အသိဆိုတာနောက်မကျပါဘူး ညီမလေးရေ သိကျွမ်းရတာဝမ်းသာပါတယ် ကလောသူလေးရေ 🙂
31/10/2012 @ 5:36 pm
Aye Aye Paing
16/11/2012 @ 4:50 am
ဟင်းကောင်းကောင်းတွေလည်း ချက်တတ်ပြီး စမတ်ကျကျလည်း နေတတ်တဲ့ မအိရေ အမြဲအားပေးနေတယ်နော် ….ဒီဆိုက်ထဲကို အမြဲလည်း လာလည်ဖြစ်ပါတယ် … အိသက်ဟင်းနည်းလေးတွေကြည့်ပြီးလည်း ပညာယူဖြစ်ပါတယ် ….. အိသက်တို့ မိသားစုလေး အမြဲတမ်း စိတ်ချမ်းသာပြီး ကိုယ်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် 🙂
21/11/2012 @ 6:40 pm
မြောက်သွားပြီမရေ ကျေးဇူးနော 🙂
16/11/2012 @ 12:43 pm
21/11/2012 @ 6:39 pm
16/11/2012 @ 1:53 pm
အိသက်ေ၇တောင်ကြီးကဧည့် သည်လာလို့ 29လမ်းမှာသွားကျွေးတယ်။စားလို့ ကောင်းလို့ တဲ့ ။ငပိထောင်းတအားကောင်းတယ်။
21/11/2012 @ 6:41 pm
ဟုတ်လားမရေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးနော် 🙂
17/11/2012 @ 6:01 am
Oh! whatabunch of lists….can’t believe that you had done italot…because we never satisfied whenever you post new and new follow….we are almost everyday clicking on your blog link and waiting with watery mouths and dropping jaws…CHEERS!
03/12/2012 @ 4:51 pm
ဟင်းချက်နည်းတွေဖတ်ရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်.. နောင်လဖတ်ဦးမှာပါဘဲ..
အိမ်ရှင်မဆိုတော့ ချက်နည်းအသစ်ဟင်းအသစ်တွေကအမြဲလိုနေတာလေ.. ဒီလိုလေးဖတ်ရတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်..တင်ပြပေးတဲ့မအိသက်ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်.နောက်လဲဟင်းအသစ်တွေ ရှိရင်လဲတင်ပြပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်.။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…
05/12/2012 @ 1:59 am
thank you so much par naw 🙂
Ma Chaw Su
12/12/2012 @ 2:26 pm
အိသက်ရေ တင်ထားတဲ့ ဟင်းခေါင်းစဉ်တွေ နဲ့တင် အရမ်းကျေနပ်နေတယ် အကုန်တောင် ဝင်မကြည့်ဖြစ်သေးဖူး လာမယ်လာမယ် ဒီကို quite often ကိုလာမယ် တော်လိုက်တာ
12/12/2012 @ 11:29 pm
thank you ma yay 🙂
17/12/2012 @ 8:20 am
ကျေးဇူးနော် အမ အီးမေးကို invite ပို့ပေးလို့
17/12/2012 @ 11:57 am
Very happy to know you ei thet when i was attend at eco my tution is front of u r shop (two story building)(haltan) ,1988. We always go to ei thet granma shop one week3ime. Nice to meet u nyi ma lay n happy to know about u r receipes espicially for myanmar snacks. I m very interesting on making of myanmar snack. I would like to try to make (tharkupyin) when i free. Thanksalot ei the
17/12/2012 @ 12:08 pm
happy to meet you nyi ma lay ei thet i will try to make (tharkupyin) i m one of Daw saw yee regular customer when i was attend at eco. My tution is opposite of u r shop(haltan).aa yan say ta nar kaung tat nyi ma lay ko lay sar par tal.ama ko lal fb accept par. thanksalot nyi ma lay.
17/12/2012 @ 5:36 pm
Blk 420., 36-205., clementi ave 1., 120420
25/12/2012 @ 5:27 am
Why do you always use “Chicken powder” … it is made from Chemical …
MSG … it is not good for health !
26/12/2012 @ 12:35 am
i use knorr chicken powder, better than MSG. if u dont like it . pls dont use it 🙂
Wah Wah Tin
02/01/2013 @ 12:17 pm
03/01/2013 @ 4:02 pm
ကိုယ်တိုင်လဲပျော်ပျော်နေချင်သလို သူများပျော်တယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ 🙂
03/01/2013 @ 5:37 pm
သာကူပြင် ပလောပီနံဆနွင်းမကင်း ဌက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်း
ဆွမ်းမွှေးကြက်သားကြော် တွေလုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ အရမ်းကောင်းပါတယ်
ရဟန်း သံဃာ ယောဂီ သီလရှင် ၁၅၀ ကျော်ကို အိသက်ရဲ့ နည်းလေးတွေ
နဲ့အာရုံဆွမ်း နေ့ ဆွမ်းတွေမှာ ကပ်လို့ရပါပြီ အဆင်ပြေပါပြီ
ီ သာဓုခေါ်ပါညီမလေး ညီမရဲ့နည်းလေးတွေကိုလဲအသုံးပြုဘို့ခွင့်ပေးပါနော်
04/01/2013 @ 4:13 pm
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မရေ အဲဒီလိုပြန်ပြောပြတဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နော် တကယ်ပါ
04/01/2013 @ 4:58 am
မမ အိသက် မမ ဟင်းချက်နည်းတွေကို သမီးအမြဲကြည့်ပြီး ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းမေမေနဲ့လုပ်စားဖြစ်
ပါတယ်။မမ ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သမီးတို့သိချင်တဲ့ recipeတွေကို မမကြောင့်သိရတာပါ။
မမ site ကိုအမြဲအားပေးနေမယ်နော်။ မမ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ…………….
04/01/2013 @ 4:07 pm
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် သမီးရေ။ ဟင်းချက်ဝါသနာပါပြီး မေမေ့ကိုကူတယ်ဆိုတော့ လိမ္မာတာပေါ့ 🙂
08/01/2013 @ 5:58 am
10/01/2013 @ 10:09 am
22/01/2013 @ 5:19 pm
25/01/2013 @ 9:11 pm
wunna ko ko
28/01/2013 @ 6:57 am
food magazine ဖတ်ပြီး အမရေးတာတွေ သဘောကျလို့ site ထဲဝင်ကြည့်တာ … ပိုသဘောကျသွားပြီဗျို့ ~~~ အမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေထားတာ ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်ဗျာ ~~~ အခုလို တကူးတကတင်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူး X 100000 ပါဗျ … 😉 🙂
29/01/2013 @ 9:53 pm
thank you so much for your support . စာအုပ်ထုတ်ဝေထားတာမရှိသေးပါဘူး 🙂
13/02/2013 @ 4:06 pm
Do u know how to make ‘ ei kyar kway ‘? I would like to eat that but I could not find in Bristol. Thanks
16/02/2013 @ 11:38 am
အရမ်း ကို ၀မ်းသာစရာ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ် အမရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို အရမ်းပဲ ချီးကျုးမိပါတယ် ဒီဆိုက်ထဲဝင်ရတာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရတယ် အင်း စားချင်တာရှိရင် ဆိုက်ထဲဝင်ကြည့် ရမယ်
17/02/2013 @ 12:42 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေ အမဆီကိုလာလို့ပျော်တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်နော် ခဏခဏလာလည်ပါ။ 🙂
16/02/2013 @ 12:58 pm
မမကိုfood magazine မှာကတည်းကအရမ်းလေးစားခဲ့တာပါ…..
17/02/2013 @ 12:39 pm
oh, that is so sweet of you nyi ma lay. really appriciate 🙂
20/02/2013 @ 5:28 am
ပဲပင်ပေါက်ချဉ်ဖတ် ဘယ်လို လုပ်ရလဲ သိချင်ပါတယ် အမ
22/02/2013 @ 3:31 am
27/02/2013 @ 8:12 am
hote kae , i wil lpost it soon naw 🙂
27/02/2013 @ 8:44 pm
What kind of Myanmar font you are using ?
01/03/2013 @ 11:14 am
i use burglish typing as i dont know how to use burmese font 🙂
kyaw kyaw soe
18/03/2013 @ 1:33 pm
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ နောက်လဲလာလည်ပါ 🙂
02/04/2013 @ 10:44 am
hi ma ei i cannot get chix powder here so wht should i use instead of chix powder?
02/04/2013 @ 11:10 pm
ညီမ အမက အချိုမှုန့်အစား အဲဒါသုံးတာ။ ဟင်းချိုအောင်လို့ပါ။ အချိုမှုန့်လဲမရနိုင်ရင်တော့ သကြားအနဲငယ် အစားထိုးသုံးပေးပါ 🙂
03/04/2013 @ 4:57 am
အစားအစာ အသစ်တွေ မချက်ဘူးတာတွေ ချက်ကြည့်မယ်
03/04/2013 @ 11:15 am
thk u for reply ma ei but i cannot read wht ur typing if possible can u type for me english.
04/04/2013 @ 11:52 am
05/04/2013 @ 11:37 am
I love your blog! It reminds me of home and whenever I want to cook, I usually browse through pages! I love it!
please post more recipes when you have time!
15/04/2013 @ 12:26 am
15/04/2013 @ 12:54 am
15/04/2013 @ 12:35 am
I would like to know how to cook Thai chicken curry. Please tell me your cooking procedure.
will try to post it soon 🙂
15/04/2013 @ 9:25 am
ma, you r my online teacher. when i was i myanmar, my cooking skill is zero. now i can cook burmese food coz of you. love you so much, ma.
thanks for sharing recipie.
danuphyu daw saw yee is my favourite burmese restaurant and i usually took thirty days door to door service manu from there.
16/04/2013 @ 2:46 am
thanksalot nyi ma lay 🙂
18/04/2013 @ 5:02 pm
26/04/2013 @ 11:38 am
မအိသက် မုန့်ပစ်စလစ် လုပ်နည်းပြန်ရှာတာမတွေ့တော့လို့ ပြန်တင်ပေးလို့ရလားဟင်
26/04/2013 @ 11:45 pm
08/05/2013 @ 10:55 am
17/05/2013 @ 9:39 am
ခုလိုမျိုး စေတနာထား အချိန်အကုန်ခံပြီး တင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတလည်းအရမ်းရပါတယ်။ Facebook မှာ Myanmar Fruits and Vegetables ဆိုပြီး အသားငါး အသီးအနှံ တွေကို မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ပုံနဲ့အတူပြတဲ့ Page လေးရှိပါတယ်။ အစ်မအဆင်ပြေလို့ကြုံတယ်ဆိုရင် မပါသေးတာလေးတွေကို Share ပေးပါ အစ်မ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
26/05/2013 @ 2:55 pm
မအိသက်ရေ လာလည်သွားပါသည်. သားရေတွေလဲတတောက်တောက်ကျသွားပါသည် ..ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး ဒီဟယလုပ်ရကောင်းနိုးနိုးနှင့် အကုန်လုံးကိုစားချင်သွားပါသည် ..အခုလိုနည်းမျိုးစုံကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ အကုန်မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်
26/05/2013 @ 2:59 pm
မမအိသက်ရေလည်လည်လာသွားပါတယ် အစုံကြည့်ရ်ျအစုံစားချင်သွားပြီး ဟိုဟာထလုပ်ရမလိုလို ဒီဟာထလုပ်ရမလိုလိုဇြစ်သွားပါသည် ရောဂါတော်တော်ထသွားပါသည် ..သူငယ်ချင်းတချို့လဲနည်းမေးလို့ တချို့ကို ပြန်မရှင်းပြတတ်ရ်ျမမဆိုဒ်လေးကိုပေးလိုက်ပါသည် .. အခုလိုမျိုးနည်းမျိုးစုံကို စေတနာသန့်သန့်နှင့်မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရျိပါသည် …
31/05/2013 @ 11:14 am
အမရေ ဟင်းချက်အချိန်အတွယ်လေးတွေ တင်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါ။
04/06/2013 @ 4:24 pm
ကျွန်တော့်ကို Thai ဟင်းကြေ်နည်းလေး တင်ပေးပါဦးနော် သူ့ ပုံစံက ကြက်သားကို အသားတွေကိုပဲ တောက်တောက်စင်းပြီးတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေး နဲ့ တော့ ကြေ်ထားတာပဲ ပဲရည် နဲ့ပင်စိမ်း ပါမလားတော့ မသိဘူး စားလို့ တော့ကောင်းတယ် ဟင်းအမည်လေးကတော့ မသိလို့ ပါ
မ သိရင် တင်ပြပေးပါနော် အစ်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမတင်ပေးထားတဲ့ ဟင်းနည်းအတိုင်း ချက်စားကြည့်တာ တော်တော် အဆင်ပြေတယ် အမကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ
14/06/2013 @ 8:02 am
27/06/2013 @ 6:15 am
ice cream လုပ်နည်းတင်ပေးပါအုံး
05/07/2013 @ 2:38 am
17/07/2013 @ 9:27 pm
hote thank you naw 🙂
18/07/2013 @ 9:00 am
ဒါကြောင့် မအိသက် အမေက5Network မှာ သမီးလေးက ကျွန်မထက်တော်တဲ့ သမီးပါ လို့ ပြောသွားတာကိုးး ဟင်းချက်နည်းတွေ အစုံပါပဲလား
18/07/2013 @ 9:13 am
ဟုတ်လား အဲဒီဟာ အရမ်းကြည့်ချင်တာ မကြည့်ရသေးဘူး 🙂
22/07/2013 @ 6:55 am
မသက်ရေ ကျွန်မ အရင်က စိန်လီစားသောက်ဆိုင်မှာ ဂျပန်စတိုင်အားလူးကြော် ကိုအရမ်းကြိုက်တာ ချက်နည်းလေးသိချင်လို့ပြောပြပေးပါလား
30/08/2013 @ 3:28 am
i hv never taste it sis yay , sorry naw 😦
29/07/2013 @ 6:30 am
I like your blogalot and cooking very much. You’reagood chef :). I watched on5plus channel that your mom said her daughter is better at cooking than her. I’ll try some dishes I like from your blog. 🙂
14/08/2013 @ 3:02 pm
17/08/2013 @ 9:46 pm
thanksalot par shint 🙂
26/08/2013 @ 6:34 am
thank you ma eithet.
I would like to know how to make tofu, for the burmese tofu salad.
If you could upload that receipe, my world perfect!
28/08/2013 @ 6:53 am
၀က်သား ကောက်ညင်းထုပ် လုပ်နည်းလေး သင်ပေးပါအုံး
02/09/2013 @ 12:15 am
28/08/2013 @ 7:45 am
ဒီတစ်ပတ် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လုပ်ကြည့်တယ် အော်ကွေ့ကြည်လုပ်စားပြီးပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
21/09/2013 @ 2:44 am
ဝက်သားမွ ကျော် လုပ်နည်းလေး သင်ပေးပါ ဦး . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
09/01/2014 @ 12:15 am
Min Khant Maw
15/10/2013 @ 5:24 am
04/11/2013 @ 3:55 am
Could you post ” Moot sein pound” please. ko Tun
will do it very soon 🙂
24/11/2013 @ 4:27 pm
08/01/2014 @ 3:41 am
02/12/2013 @ 6:14 pm
29/12/2013 @ 6:05 am
အန်တီ ကျနော်ကမုံရွာကပါ ဟော့ပေါ့လုပ်စားနည်းမှာ ဟင်းရည်မလုပ်တက်လို့ပါ ကြက်ချဉ်စပ်ဟော့ပေါ့ ဟင်းရည်လုပ်နည်းလေးသိချင်လို့ပါ ဝက်သား အမဲသားမစားလို့ပါခင်ဗျာ
ဒါနဲ့စကားမစပ် ဒီဘလော့လေးက အင်မတန်ကိုစုံပါပေတယ်ဗျာ ချီးကျူးပါတယ် 😀
09/01/2014 @ 12:13 am
အင်းတေဇာရေ အန်တီအခေါ်ခံလိုက်ရလို့ နဲနဲတော့ နင်သွားတယ် ဝက်ရိုးအစား ကြက်ရိုးကိုသုံးပြီး ငရုတ်သီးစိမ်း နဲ့ သံပုရာရည်ထဲ့ရုံပဲလေ
08/01/2014 @ 11:05 pm
I want you to say thank you very very much for cooking method. This is very useful website for Myanmar people. We live in oversea and we always expect Myanmar food. I want you to say again THANK YOU VERY VERY MUCH. GOD BLESS YOU.
16/01/2014 @ 12:39 pm
23/01/2014 @ 9:19 am
ဒီလို မျိုး page လေးကို လုပ်ထားပေးတဲ့ မမ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တော်တော် လေးလဲ စုံတယ်နော် — အမ တော်လိုက်တာ နော်..
24/01/2014 @ 10:05 pm
welcome par nyi ma lay 🙂
24/01/2014 @ 11:19 pm
This is my first time visit to this site… I have never known this kind of site exist… Thx u so much sis…I am really appreciate ur effort..Xxx I also want to know how to make ”Kyat Thar Thote” from raw chichen…Thx u par sis.. 🙂
24/01/2014 @ 11:44 pm
ကြက်သားသုတ် ဆိုတာ ဗမာသုတ်ကိုပြောတာလား ပဲရည်သုတ်ကိုပြောတာလား ညီမရေ
25/01/2014 @ 12:06 am
pe’ yay thote parama… ta khar loat sar dar thate ma tuu boo… chin skin ka shop ka lo dry ma phyit loama… A dar lay tin pay bar Oo naw. Thx u par sis… Xxx
25/01/2014 @ 12:52 am
25/01/2014 @ 12:07 am
23/02/2014 @ 3:26 pm
Many many thanks for this blog Ma…<3
07/03/2014 @ 9:15 pm
Please show me how to cook ကရငျ တာ​လ​ပေါ့​ဟငျး​ခကျြ​နညျး,sis. Thank you.
17/04/2014 @ 9:46 am
01/06/2014 @ 11:57 pm
sis , I vist your website very regularly… thanksalot for your great receipes……. They help mealot….. Can I ask you one thing …. Can you post how to make black tofu as i like it very much , together with mote hin khar or coconut noodles…. i ‘m away fr myanmar and so cannot buy it here,,, really starving for it:P… Thanks you so much sis ei thet.. :)))))
May Myat Mon Mon
18/09/2014 @ 9:41 pm
Thanks for everything Ma Ma Thet!
05/10/2014 @ 3:05 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမတို့က ကျောင်းသူဘဝထဲက ဓနုဖြူဆိုင်မှာချိုင့်ဆွဲစားတာ။ အာဒီးယားလမ်း
အန်တီနဲ့အန်ကယ်ရယ်ကတော့အမတို့ကိုမြင်ယင်မှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီဆိုင်မှာ သွားသွားပြီး သောင်းကျန်းနေကျမို့လို့လေ။
05/10/2014 @ 9:17 pm
thanks so muchama yae 🙂
14/10/2014 @ 7:51 pm
Daw Han Zar
18/04/2015 @ 1:09 pm
အမရေ ငါးဇင်ရိုင်းအခြောက် ချက်နည်းလေး ပြောပြပေးပါလားရှင် ..